थोत्रा र च्यातिएका अर्बौं नोट राष्ट्र बैंकले यसरी जलाउँछ,नोट छाप्न वार्षिक ४ अर्ब रुपैयाँ लगानी » aarthikplus
यी तीन बैंकले तीन महिनामै कमाए अर्बभन्दा बढी खुद नाफा,अरु बैंकले कति कमाए?
यी सिमेन्ट उद्योगले पाए नेपाल गुणस्तर चिन्ह अवार्ड
ठगीको आरोपमा थुनिएका शाहीकालका मन्त्री रुप ज्योतीको मुद्दा यसरी हुने भयो फिर्ता,यस्तो थियो केस
कर छल्ने यस्तो सम्म भेटियो काईदा,भारतीयले राजस्व लुटेर नेपालीका नाममा यसरी लुकाए सम्पत्ति
सहकारीका ५ लाख कर्मचारी सामाजिक सुरक्षामा यसरी बाँधिने भए,देशभर कति छन् सहकारी ?
कर तिर्नेको संख्या ह्वात्तै बढ्यो,३ महिनामै सवा ७ लाख थपिए
दुई महिनामै ‘हुन्डी’बाट यसरी भित्रियो १ खर्ब ५३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स,राष्ट्र बैकलाई थपियो तनाब
विदेशबाट फर्कदा सुन लिएर आउदै हुनुहुन्छ ? यदी हो भने सुनको भन्सार ६ महिनामै बढ्यो अब यति लाग्छ
गलत समाचार प्रति एनआरएनए आईसिसि सदस्य तथा द.कोरियाका निबर्तमान अध्यक्ष लक्ष्मी गुरुङको ध्यानाकर्षण
भ्रमण बर्षलाई सफल बनाउन ठमेलमा शुरु भयो काम,अधिकारीले चलाए मध्यरातमै यस्तो अभियान
सिमेन्ट बनाउन प्रयोग गरिने कच्चा पदार्थ क्लिंकर आयातमा गिरावट, तीन महिनामा ४ अर्ब घट्यो
बैंकका लागि साइबर सुरक्षा बीमा बन्यो पासो,राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई यसरी लगाउदैछ सनासो
भारत संग नेपालको कारोबार उच्च हुँदा चीनले यसरी डरलाग्दो लगानी खान्यायो,नेपाललाई कुन देशले कति दिए
बैंकमा पैसा जम्मा हुनै छोड्यो,निक्षेप घट्दा कर्जा प्रवाहमा यसरी छायो सुस्तता
चेक बाउन्सको मुद्दा सरकारबादी नभएको भन्दै प्रहरीले उजुरी लिनै छोड्यो,यस्तो छ अदालतको फैसला
सरकारले साढे ३ महिनामा ५ प्रतिशत मात्रै विकासमा खर्च गर्यो,कुन शिर्षकमा कति भयो खर्च ?
प्रधानमन्त्री संग नजिक भएको फुर्ती देखाएर बदमासी गरे पछि डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठलाई यसरी लाग्यो साढे साती दशा
डिजेल र मट्टितेलको आयातमा यसरी आयो कमी, आयल निगमको ६ अर्ब कसरी जोगियो ?
युवाका लागी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सुरु गर्ने भयो आर्थिक उपार्जनको यस्तो दमदार एकेडेमी
५९ अर्ब निक्षेप लिएर १ खर्ब १८ अर्ब कर्जा दिएर बैकहरुले देखाए यसरी आक्रामक स्वरुप
थोत्रा र च्यातिएका अर्बौं नोट राष्ट्र बैंकले यसरी जलाउँछ,नोट छाप्न वार्षिक ४ अर्ब रुपैयाँ लगानी
काठमाडौं – नोट च्यातियो वा फोहोर भयो भने हामी बैंकले साटिहाल्छ नि भनेर ढुक्क हुन्छौं । पानीले भिजेका, झुत्रा भएका नोट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले साटेका पनि हुन्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु हामीबाट संकलन गरेका नोट लिएर नेपाल राष्ट्र बैंक पुग्छन् । राष्ट्र बैंकले ती नोट साट्छ । काम लाग्ने खालका नोटलाई सेतो फेरि बजारमा पठाइन्छ भने बाँकी कामै नलाग्ने नोट जलाइन्छ । र, त्यसबो साटो नयाँ नोट छापिन्छ । राष्ट्रको आवश्यकता अनुसार राष्ट्र बैंकले नोट छपाइ गर्छ । नोट छपाइका लागि वार्षिक ४ अर्ब रुपैयाँ विदेशिन्छ ।
नयाँ नोट राष्ट्र बैंकले चीन, जर्मनी, स्वीडेन, बेलायत, नेदरल्याण्ड, क्यानडा, फ्रान्स, रसिया, इन्डोनेसीयालगायतका मुलुकहरुमा छाप्छ । राष्ट्र बैंकले आवश्यकता अनुसार छपाइएका नयाँ बजारमा निश्काषन गर्नुका साथै झुक्रिएका पुरानो नोटहरुसँग सटही पनि गर्छ । यो वर्ष पनि राष्ट्र बैंकले १३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ५, १०, २०, ५०, १००, ५०० र १००० दरका नयाँ नोट निष्काशन गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रपक्ता लक्ष्मी प्रपन्न निरौलाले बताए । मुलुकभर ७८ वटा नोट कोषहरु सञ्चालनमा छन् । नोटकोषहरु राष्ट्रिय वाणिज्य र नेपाल बैंकका कतिपय शाखामार्फत् सञ्चालनमा छन् । ती नोट कोषबाट पुराना झुत्रा नोट राष्ट्र बैंकको प्रधान कार्यालय आउँछन । राष्ट्र बैंक पुगेपछि पुनः चलनचल्तीमा आउँदैनन् ।
स्ता काम नलाग्ने नोट राष्ट्र बैंकले जलाउने गर्छ । ५ वर्षमा राष्ट्र बैंकले ४ खर्ब ९४ अर्ब ७६ करोड ६९ लाख ९४ हजार रुपैयाँ बराबरका विभिन्न दरका नोट जलाएको हो । यो वर्षमात्र राष्ट्र बैंकले ७६ अर्ब ९५ करोड ७० लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबरको पुनः चलनचल्तीमा बजार पठाउन नमिल्ने झुत्रा नोटहरु जलाएको छ । गत आर्थिक बर्षमा यस प्रकारका ५६ अर्ब ४० करोड ५७ लाख ७० हजार रुपैयाँ बराबरका नोटहरु जलाइएका थिए । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा २५ अर्ब ७५ करोड २४ लाख १० हजार ४९५ रुपैयाँ, ०७२/७३ मा २६ अर्ब २७ करोड ७८ लाख ४३ हजार ७०५ रुपैयाँ, ०७१/७२ मा ४० अर्ब ५४ करोड ८१ लाख ७१ हजार ७४ रुपैयाँ र ०७०/७१ मा १९ अर्ब ३७ करोड ९६ लाख ४१ हजार ९३७ रुपैयाँ बराबरको नोट जलाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
हाल बजारमा ४ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ बराबरका विभिन्न दरका नोटहरु चलनचल्तीमा छन् । चलनचल्तीमा पुगेका नोटहरुमा सबैभन्दा चाँडो साना दरका नोटहरु बिग्रिने प्रवक्ता निरौलाको भनाइ छ । ‘सानादरका नोटहरुलाई हेलचेक्राई गरेर चलाउने गर्छन्,’ उनले भने, ‘वर्षेनी ठूलादरका नोटभन्दा ५ देखि १०० दरका नोटहरुको जलन परिमाण बढी रहेको छ ।’ ५ वर्षमा ८१ करोड ९४ लाख ९८ हजार ८१३ थान बढी ठूलादरका नोटभन्दा सानादरका नोटहरु जलाइएका छन् । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार ५ वर्षमा १ अर्ब १० करोड ३३ लाख २० हजार ३१६ थान ५, १०, ५० र १०० दरका नोट जलाइएका छन् भने २८ करोड ३८ लाख २१ हजार ५०३ थान ५०० र १००० दरका नोट जलाइएका छन् । योदेखि बाहेक पनि राष्ट्र बैंकले १, २, २५ र २५० दरका नोटहरु पनि केही परिमाणमा जलाएको छ । यी दरका नयाँ नोटहरुको छपाइ भने राष्ट बैंकले केही समययता बन्द गरेको जनाएको छ । नोट जलन प्रक्रिया झुत्रिएका नोट जलाउन राष्ट्र बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन विभाग प्रमुखकै संयोजकत्वमा जलन समिति छ । झुक्रिएका तथा काम नलाग्ने नोटहरु राष्ट्र बैंकको थापाथली, नेपालगञ्ज, वीरगञ्ज, पोखरा, बिराटनगर, धनगढी, जनकपुर र भैरवाह शाखा कार्यालयहरुमा नोट जलन कार्य गरिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट संकलन भएका विभिन्न दरका नोटहरू राष्ट्र बैंकको ढुकुटीमा जम्मा गरिन्छ । बजारबाट झुक्रा भनिएका राष्ट्र बैंक ल्याइएका नोटहरुमा पहेलो स्टिकर टाँसिएको हुन्छ । त्यस्ता नोटहरुमा चल्ने तथा नचल्ने दुबै प्रकारका नोटहरु हुन्छन् । जम्मा भएका नोटहरुबाट राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरुले झुत्रा तथा पुराना, प्वाल परेको, च्यातिएको, रंग दलिएको, मौलिएको, टेप टाँसिएको र कोरिएको नोट र सुकिला नोटहरु छुट्याउने गर्छन् । नोटका बन्डलहरुमा सुकिला नोट र झुत्रा नोट तथा नोटहरु नचल्ने र चल्लने गरी छुट्याएपछि बजारमा पठाउन योग्य सुकिला नोटमा सेतो स्टिकर टाँसिन्छ र बजारमा पुनः चलनचल्तीमा पठाइन्छ । चलनचल्तीमा पठाउन अयोग्य नोटहरुको गणना गरी २ देखि ४ वटासम्म प्वाल पारिन्छ । राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरुले गणना गरिएका नोटहरुलाई जलाउनुभन्दा अगाडि नेपाल सरकारको प्रतिनिधी, नेपाल राष्ट्र बैंकको विभिन्न विभागको प्रतिनिधिको रोहवरमा कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी जलाइन्छ ।